FAMPIOFANANA ARAK’ASA : Singa iray ahafahana mampandroso ny firenena
Tato anatin’ny taona vitsivitsy izay dia tsy nitsaha-nitombo ny tahan’ireo olona tafiditra ao anatin’ny tsy fananan’asa. Fari-piainan’olona maro ihany koa, araka izany, no nidina satria tsy nisy ny fidiram-bola. 13 mars 2018
Vahaolana iray hahafahana manaisotra ny olona anatin’izay lavaky ny fahasahiranana izay ny tontolon’ny fampiofanana arak’asa. Ankoatra io anefa dia ilaina ihany koa ny manome fampiofanana ny olona mahakasika ny tontolo ambanivohitra. Ny maro an’isa amin’ny Malagasy rahateo dia mbola monina any amin’ny tontolo ambanivohitra ka azo heverina ho fanoitra amin’ny fampandrosoana ny fampahalalana azy ireo ny tontolo iainany sy ny misy azy.
Tsara ho fantatra fa efa manana ny paikadim-pirenena amin’ny fampiofanana momba ny tontolo ambanivohitra sy ny arak’asa i Madagasikara. Paikady izay efa nampiharina nanomboka ny taona 2012 hatramin’ny 2017 lasa teo. Raha tsiahivina dia efa nisy ny rafitra najoro sy hanatanteraka izay paikadim-pirenena izay, na ny Smfar izany ho an’ny sehatra nasionaly ary ny komitim-paritra kosa, na ny Crfar ho an’ny isam-paritra. Araka ny fanazavana dia betsaka ny zavatra vita nandritr’ izay dimy taona izay ary tsapa fa nivoatra ny fampiharana natao.
Tanjona rahateo ny hametrahana araka ny tokony ho izy ny famokarana any ifotony sy hahafahan’ny fianakaviana mivelona sy mandroso. Toy ny rafitra rehetra ihany, ny fiandohan’ny taona tahaka izao no ahafahana manao jery todika sy hametrahana vina ho an’ny fomba fiasa vaovao. Nisy araka izany ny atrikasa fakan-kevitra notontosaina tao an-tampon-tanànan’i Toamasina ho an’ireo mpikambana Crfar Atsinanana nanaovana famintinana, fanintsiana ny amin’ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao intsony.
Nandritra izany ihany koa no nijerena ny tokony natao sy izay vita ary tokony mbola ho tohizana. Ankoatra izay, tanjon’ny atrikasa ny hahafahan’ny Crfar mametraka fitantanana tsara kokoa, mba hahatonga azy io ho toy ny antokon-draharaha toavin’ny rehetra ary manana fahefana hametraka sori-dalana amin’ny fandaharan’asa mahomby hananana mpamokatra mavitrika hiatrehana ny fampandrosoana.